Malaysia na-achọ ịkwalite njem nlegharị anya nke Islam post-COVID-19
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Malaysia » Malaysia na-achọ ịkwalite njem nlegharị anya nke Islam post-COVID-19
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa Malaysia • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
O doro anya na ahịa ndị Alakụba ga-ebugharị na nnukwu ụzọ ozugbo ọnọdụ CoOVID-19 dị mma
World Islamic Tourism Council President, Dato Mohd Khalid Harun kwuru na ahịa ndị Alakụba nwere ike ịga njem buru ibu ozugbo ọnọdụ CoOVID-19 meziwanye ma kpọọ maka ebe na ndị ọrụ ụlọ ọrụ iji kwadebe maka mmeghe nke njem ugbu a.
Njegharị ndị Alakụba bụ otu n'ime ndị ama ama na ụlọ ọrụ Halal na site na njem na Malaysia nwere ike ịgbasa akụ na ụba ha ma ọ bụ nweta ego site na ego mba ọzọ. Dịka anyị nwere ike ịhụ, njem abụrụla otu n'ime nnukwu ego nwere ike ị nweta ego na ụwa a jikọtara ọnụ ma jikọọ ọnụ, ọkachasị na Malaysia.
Dato Mohd Khalid gbara ndi oru ulo oru aka na Malaysia ume ka ha bido iche echiche banyere otu ha ga-esi na-aru oru ndi njem nleta nke ndi Alakụba site n’itule ihe dika ime Halal ma obu ihe oriri na ulo ikpe di mfe. O kwuru, sị: “Enwere ike itinye mkpa ndị a na akụrụngwa na ebe nkiri dị ka ụlọ ahịa, ụlọ nri, ogige ntụrụndụ, ebe obibi, yana ọbụlagodi na mmemme pụrụ iche. Anyị ga-aga n'ihu ịnye akụrụngwa na akụrụngwa dị mkpa iji zute ọnụ ọgụgụ ndị a na-atụ anya nke ndị njem Alakụba si gburugburu ụwa ozugbo emepere oke ala, yana imezu ihe okwukwe ha chọrọ.
Dato Mohd Khalid kwuru, sị: “Otu n’ime mmemme ndị World Islamic Tourism Council ga-ebute bụ Islamic Tourism Conference & Exhibition. Ọ bụ ihe agbakwunyere-uru mmemme maka ụlọ ọrụ ọkpụkpọ n'ụwa nile iji ohere a na-amụta site ọkachamara na ogbako na ime ka ịkparịta ụka n'duringntanet n'oge Ngosi.
N'afọ 2019, enwere ngụkọta nke ndị njem nlegharị anya Alakụba nde 140, na-anọchite 10% nke ụlọ ọrụ njem ụwa. A na-atụ anya na ọnụọgụ a ga - abawanye ọrịa na - efe efe yana ọnụọgụ ndị Alakụba na - eto na 70% ma e jiri ya tụnyere nkezi ụwa nke 32%.
N'etiti ahịa ndị njem nlegharị anya nke Alakụba mara maka ikike ịzụta ikike ha dị elu bụ Gulf Cooperation Council, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, South Asia, Iran, Turkey, Western Europe, na ahịa North America.
World Islamic Tourism Council nwere nchekwube na njem nlegharị anya nke Alakụba nwere ike iwepụta nloghachi dị elu maka ụlọ ọrụ ndị njem nlegharị anya na obodo iji mepụta Malaysia dị ka ebe njem njem njem Islam na-akwụsị ozugbo COVID-19 kpochapụrụ. Dato Mohd Khalid, kwupụtara na ya nwere ntụkwasị obi na mpaghara njem ndị Alakụba Alakụba nwere ike ịlaghachi elu na-eso Covid-19.